Ezona zixhobo zeendaba zasimahla zidumileyo zeMac | Ndisuka mac
Bathi "ulwazi ngamandla" kwaye nangona ukubona panorama yangoku eSpain kunye nehlabathi liphela, le yinto endibona kunzima ukuyikholelwa, asinakho ukufulathela ulwazi kunye nolwazi olukhoyo ngokubanzi ngoku, nangona Kukukwazi ukuba nezihloko onokuthi uncokole ngazo nolwazi lwezibakala. I-Intanethi iyithathile idatha ngokugqithileyo, ibangela oko abanye bakuchaza njengolwazi olugqithisileyo ekhokelela ngokungalunganga kulwazi olungelulo. Le yinto eyaziwa ngokuba yi ulwazi, igama elichazwe kakuhle yingcali u-Alfonso Cornellá. Ngethamsanqa, kukho iindlela zokuhlala sinolwazi ngelixa sibaleka kolo lwazi.
KwiVenkile ye-Mac App, njengakwiVenkile ye App ye-iOS, sinenani elikhulu kunye nezicelo ezahlukeneyo ezisivumela ukuba sifikelele kwezona ndaba zangoku nawo onke amasebe olwazi; app ukuba, ukongeza, siyisebenzisa ngokuchanekileyo, basivumela ukuba sikhethe okungcono kokungafunekiyo, sikhethe eyona inomdla kuthi, okanye sigcine ezo sifuna ukuzifundela elona xesha lifanelekileyo. Namhlanje ndikubonisa ezona zicelo zeendaba zisimahla zeMac, oko kukuthi, ezona zilayishwe kakhulu ngabasebenzisi. Nokuba zezona zibalaseleyo okanye hayi, oko kufuneka kugqitywe ngumntu ngamnye.
4 Shrook RSS Umfundi
5 Kwaye abafundi beRSS abangaphezulu
5.1 I-RSS Bot-Isazisi seendaba
5.2 Umlandeli weRSS
5.3 Iindaba zethamsanqa
5.5 Cinezela iReader
Kwindawo yokuqala yokusetyenziswa kweendaba zasimahla zeMac yi-Twitter, inethiwekhi ethile yabanye, abanye usetyenziso lweendaba. Yinkampani ngokwayo echazwe kudidi lweeNdaba, ke ayizukuba ndim oya kuyixoxa.
Twitter ivumela ukuba saziswe malunga nokupheka ngalo lonke ixesha, kodwa ikwangumphumo weendaba ezingezizo, ngakumbi ezo zinxulumene nokufa kwabantu abadumileyo. Ukulandela imithombo yeendaba eyaziwayo neqinisekisiweyo kunye nobuntu, kunye nokusetyenziswa kwe-hashtag, zezona zixhobo zibalaseleyo kwi-Twitter.
Okwesibini sinePokotho, isicelo esekwe kwisininzi "gcina kamva". Pocket Ithala lencwadi lomntu elenziwa ngumsebenzisi ngokusekwe kwiminqweno yabo. Ngaba ulibonile inqaku elinomdla kakhulu kodwa ongakwaziyo ukulifunda ngoku? Ngokucofa nje okukodwa, ungagcina ePokothweni kwaye ungayifunda ngoxolo lwengqondo nanini na kwaye naphi na apho ufuna khona. Ukongeza, unokwenza iilebheli kwaye uzinike ukufundwa kwakho okugciniweyo, ukuba namhlanje ufuna ukufunda nge-cinema, hayi ngezopolitiko.
Feedly Yiyo Umdibanisi weendaba / iRSS feed. Uff, kuyavakala ukuba yoyikeka, kodwa yeyona ndlela isetyenziswayo ehlabathini kwaye ngaphezu kwako konke, yeyona ndlela ingcono yokwaziswa ngendlela engqingqwa ukusukela kwiFeedly kuphela ulwazi olupapashwe ngamajelo eendaba othembekileyo, ezo uzongezayo ziya kuvela, kwaye akukho nto iyenye.
Isicelo seFeedly siqokelela umxholo kwiiwebhusayithi zakho ozithandayo, iibhloko, iziteshi zeYouTube, kunye nokutya kweRSS kwindawo enye.
feedly. Funda ngakumbi, wazi ngakumbi.Mahala
Shrook RSS Umfundi
Shrook RSS Reader en omnye umfundi weRSS Umsebenzi wazo ofana noFeedly, ukufumana ushicilelo lweebhlog zakho ozithandayo kunye neendawo zeendaba kwindawo enye, nangona kunjalo, ujongano lwayo lushiya okunqwenelekayo ngokoyilo. Okwangoku, ikwindawo yesine phakathi kwezona ndaba zithandwayo zasimahla zeendaba zeMac.
Kwaye abafundi beRSS abangaphezulu
Ewe, kwizicelo ezilishumi zeendaba ezithandwayo zasimahla- ezikhutshelweyo, Abafundi be-RSS feed balawula ukuthi ga. Ukuba sele sikwindawo yesithathu siyifumene Feedly, RSS feed aggregates iyaqhubeka ukuya kwinani leshumi (ngaphandle kwenombolo yesibhozo apho usetyenziso lweewotshi zehlabathi luye lwangena).
Yiyo loo nto ezona zicelo zisimahla zeendaba zisimahla zeMac zizalisa:
I-RSS Bot-Isazisi seendaba
I-RSS Bot-Isazisi seendabaMahala
Ngaba usebenzisa naluphi na olu setyenziso ukugcina iindaba ezivela kwi-Mac yakho okanye usebenzisa enye iapps ehlawulelweyo? Yeyiphi oyithandayo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Ezona zixhobo zeendaba zasimahla zidumileyo zeMac
UTim Cook ngokubaluleka kweyantlukwano kunye nokufakwa kwintetho yakhe ka-Auburn